ट्वाइलेटमा स्मार्टफोन प्रयोग गर्नाले पाइल्सको समस्या – Hello Punarwas
ट्वाइलेटमा स्मार्टफोन प्रयोग गर्नाले पाइल्सको समस्या
On २३ आश्विन २०७६, बिहीबार १३:०९
दिसापिसाब गर्ने बेलामा ट्वाइलेटमा मोबाइल पनि सँगै लग्ने गर्नुभएको छ ? दिसा बस्दै मोबाइल हेर्दै गर्नुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने आजैबाट त्यो बानी छाड्नुहोला । किनकी, ट्वाइलेटमा मोबाइल हेर्ने बानीले तपाइँलाई पाइल्स गराउन सक्छ ।
खासगरी दिसा गर्ने बेलामा मोबाइल हेर्ने बानीले पाइल्सको जोखिम बढाउने बताइएको छ । मोबाइल हेर्दै दिसा गर्दा लामो समय लाग्ने र त्यसबेला मलद्वारका रक्तनलीहरुमा चाप बढ्नाले पाइल्सको जोखिम बढ्ने विज्ञहरुको निष्कर्ष छ ।
ट्वाइलेटमा बसेर फोनमा समय बिताउँदा अनावश्यक रुपमा दिसा निकाल्न बल लगाइन्छ । त्यसो गर्दा ठूलो आन्द्राको तल्लो भागमा दबाब बढ्नुका साथै दिसा बाहिर निकाल्न सहयोग पूराउने चिप्लो पदार्थ अत्यधिक नास हुनुका साथै मलद्वारको भित्री भागमा बढि घर्षण पैदा हुन्छ । यसले पाइल्स तथा मलद्वारमा घाउ हुने, सुन्निने र रगत बग्ने लगायतका समस्या देखा पर्दछ ।
हालै बेलायतमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार ५७ प्रतिशत बेलायतीले ट्वाइलेटमा मोबाइल प्रयोग गर्दछन् । त्यसमध्ये ८ प्रतिशतले त सधै नै ट्वाइलेटमा मोबाइल चलाउने गरेका छन् ।
ट्वाइलेट बस्दा मोबाइल चलाउनु मात्र हानिकारक होइन । किताब पढेर वा अरु नै कुरामा भुलेर दिसा गर्दा धेरै जोड लगाउने र लामो समय बिताउने गर्नाले पाइल्सको जोखिम बढ्ने विज्ञहरु बताउँछन् । एजेन्सीको सहयोगमा
हेल्लो पुनर्वास 1649 posts0comments
अनैतिक सम्बन्ध राखेको आरोपमा मालपोत कार्यालय बेलौरीका प्रमुख ऐडी प्रहरी हिरासतमा
पुनर्वासमा सुदूरपश्चिमस्तरीय बुद्धिचाल प्रतियोगिता हुँदै
एकसाता अघि मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका पुनर्वासका वडासदस्य पृथ्वी गुरुङको उपचारको…
पुनर्वासमा यसै वर्ष दुई चिस्यान केन्द्र बन्छ : नगर प्रमुख…
१ माघ २०७७, बिहीबार १५:२३